Soo saarista baradhada la iibsan karo ayaa lagu taageeri doonaa gobolka Penza - majaladda "Nidaamka Baradhada"
Ugu weyn Wararka Ruushka Wararka gobolka
в News, Wararka gobolka
Bishii Febraayo 19keedii, Wasaaradda Beeraha ee gobolka, waxaa la qabtay shir looga arrinsanayo horumarinta baradhada ka baxda gobolka.
Arrintaan ayaa heshay tixgelin gaar ah oo ku saabsan gobolka Penza, maadaama sanadihii la soo dhaafay uu hoos u dhac ku yimid wax soo saarka dalaggan. Xusuusnow in 2020, gobolku goostay 293,4 kun tan oo baradho ah.
Baaxada ugu weyn ee baradhada gobolka ayaa hadda laga soo saaray beeraha gaarka loo leeyahay iyo kuwa gaarka loo leeyahay. Si loo daneeyo shirkadaha waaweyn ee dhaqanka, kulanka waxaa lagu go'aamiyay in laga shaqeeyo arrimaha qoondaynta miisaaniyadda miisaaniyadda gobolka si dib loogu bixiyo kharashka soo saarayaasha beeraha ee soo iibsiga abuurka wax soo saarka ee baradhada ganacsiga ee 1 iyo 2 soo-saarid iyo iibsashada qalab gaar ah, iyadoo la siiyay gabow iyo baaxad weyn ee beeraha gobolka ka jira.
Wasiirka Beeraha ee gobolka, Roman Kalentyev, wuxuu taageeray fikradda ah in la sameeyo barnaamij goboleed lagu taageerayo beeralayda baradhada wuxuuna faray in la abuuro koox ka shaqeysa soo diyaarinta fikradda.
Intaas waxaa sii dheer, hanti dhowrka awooda kaydinta baradhada ee hada jira ayaa lagu soo daray qorshaha shaqada ee wasaarada si loo qiimeeyo baahiyaha abuurida qaab dhismeedyada saadka. Wasiirka ayaa sidoo kale soo jeediyay in la barto waaya aragnimada Jamhuuriyadda Mordovia ee abuurista xarumo wax lagu qeybiyo. "Waxaan u wareejin karnaa qaabkan gobolkeena si beeraleyda baradhada ay damaanad qaadaan iibka, qiimaha iyo taageerada," ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay Roman Kalentyev.
Source: Adeegga Saxaafadda ee Wasaaradda Beeraha ee Gobolka Penza
Tags: baradho korayaGobolka Penza
Webinar: Teknolojiyada wax soo saarka Karootada
Gobolka Novgorod wuxuu horumar la taaban karo ka sameeyay soo saarista baradhada iyo khudradda sanadkii 2020